Hay’ada Kaalo oo kulan wacyigelin ah u qabatay Qaxootiga iyo Bulshada Rayidka ee Qardho. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Hay’ada Kaalo oo kulan wacyigelin ah u qabatay Qaxootiga iyo Bulshada Rayidka ee Qardho.
Hay’ada Kaalo oo kulan wacyigelin ah u qabatay Qaxootiga iyo Bulshada Rayidka ee Qardho.
June 26, 2019 - By: Mohamud Nadif
In ka badan 50 qof oo isugu jira Gudiyada Xaafadaha Magaalada Qardho, Culimo u diin, Dhalinyaro iyo Qaxootiga Magaalada ku sugan ayaa ka faaidaystay kulankaan wacyigelinta ah oo looga hadlayay sidii loo xoojin lahaa kuwada noolaashaha nabada iyo is dhexgalka Bulshada. Mashruucaan oo ay Hay’ada Kaalo waday ayaa horay looga soo qabtya Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari.
Cabdi jaliil Saciid Madaxa Hay’ada Kaalo aya augu horayn casharo u jeediyay kasoo qaybgalayaasha isagoo kula dardaarmay in ay si wanaagsan uga faaidaystaan. waxaa uu sheeyeen dhiibaatooyinka bulshada ka dhxe jira iyo sida loo xalin karo, Gudiyada Xaafadaha iyo xubnaha ka socday Bulshada Rayidka ayaa loo tilmaamey sida ugu wanaagsan ee ay ugu cadaalad fali kraan dadka ay masuulka ka yihiin.
Ka qaybqaatayaasha Tababarkaan ayaa sheegay in casharada ay halkaan ka qaataan ay dib ugu celin xaafadihii iyo xafiisyadii ay ka yimaadeen ayna ku adadaali doonaan sidii ay uga dhabayn lahayaeen casharada ay maanta barteen.